Harena ankibon’ny tany Manana akora tena be mpitady maneran-tany i Madagasikara
Ahitana harena ankibon’ny tany antsoina hoe Lithium izay singa ampiasaina amin’ny fanamboarana finday sy fakan-tsary ary koa manana “Carbone”
izay ilaina amin’ny fanamboarana vatana fiarakodia sy fiaramanidina (Airbus A380) i Madagasikara ary mbola misy maro hafa izay tena be mpitady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena. Izany no vokatry ny fikarohana sy fanadihadiana nataon’ny vondron’ny mpampianatra mpikaroka Malagasy ka nampahafantarina teny amin’ny oniversiten’Antananarivo omaly alarobia 15 mey. Omena ny minisiteran’ny harena ankibon’ny tany ny vokatry ny fikarohana mba hahafahana mamadika azy ho tetikasa ka hirosoana amin’ny fitrandrahana. Ireo mpandraharaha Malagasy no omena vahana raha ny fanirian’ireo mpampianatra mpikaroka ireto. Hatrizay mantsy dia ireo orinasa goavana vahiny hatrany no tena mahazo tombontsoa amin’ny harena ankibon’ny tany Malagasy.